यसकारणले गर्दा महिलालाई मन पर्छ आफु भन्दा बढी उमेरका पुरुष , हेर्नुहोस ! – Gandaki Chhadke
यसकारणले गर्दा महिलालाई मन पर्छ आफु भन्दा बढी उमेरका पुरुष , हेर्नुहोस !
एजेन्सी , जब महिलाहरुमा बै’वाहिक स’म्बन्धको कुरा आउछ तब उनीहरु आफु भन्दा बढी उमेरका पुरुषप्रति बढी आ’कर्षित हुने गर्छन। यस्तो किन त के तपाइले यो बारेमा कहिले सोच्नु भएको छ। महिलाहरु आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषप्रति समझदार र अनुभवी भएकै कारणले इ’म्प्रेस हुने गर्छन। यसका अलावा अन्य यी कारणले गर्दा ’अक्सर अधिकांश महिला आफु भन्दा बढी उमेर भएका पुरुषका साथमा डे’ट गर्न चाहन्छन र संगै जीवन बि’ताउन पनि आउनुहोस जान्नुहोस यसको पछाडिको करणको बारेमा ।
अ’नुभवी: बढ्दो उमेर संगै मानिसमा विभिन्न अनुभवको विकास हुदै जान्छ। यसै कारणले बढी उमेर भएका मानिसमा अनुभवका हिसाबले प’रिपक्व हुनका साथै हरेक कठिन परिस्थितिको सजिलै सा’मना गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा नै महिलाहरु आफूभन्दा बढी उमेरका पुरुषसंग जिन्दगी बि’ताउने सपना देख्छन। प’रिपक्व: उमेर ब’ढेसंगै हरेक मानिस परिपक्व हुदै जानु स्वाभाविक हो। बढी उमेर भएका जो सुकै व्यक्तिमा प’रिपक्वता र स’मझदारीपन आउने गर्छ। यति मात्र नभई यी मानिसले हरेक सम्बन्धलाई ग’म्भीरता पुर्वक लिने गर्दछन। त्यसैले बढी उमेर भएकासंग लामो समयसम्म आफ्नो सम्बन्ध जो’गाईराख्न सकिन्छ।
स’मझदार:बढी उमेरको पुरुष महिलाको लागि राम्रो लिस्नर पनि हो साथै स’मझदार पनि। हरेक महिलाहरु आफ्नो हुनेवाला जी’वनसाथी स’मझदार चाहन्छन। त्यसैले यी सब क्वा’लिटी अलि पाको उमेरको मान्छेमा हुने भएकाले उनीहरु आफु भन्दा केहि प’रिपक्व पुरुष नै चाहन्छन। स्व’तन्त्र: उमेर बढेसंगै मानिस आफ्नो नि’र्णय आफै आफै लिन स’क्षम ह्हुन्छ। उनीहरुमा आफ्नो नि’र्णय लिने स्व’तन्त्रता हुन्छ। उनीहरुमा घर स’म्हाल्ने देखि लिएर अ’न्यज्ञान हुन्छ जसले गर्दा यस्ता पुरुष प्रति अ’क्सर महिलाहरु बढी इ’म्प्रेस हुने गर्छन।
आर्थिक रुपले स’क्षम: बढी उमेरका पुरुषहरु आर्थिक रुपले पनि स’बल हुन्छन। महिलाको इच्छा पनि आफ्नो श्रीमान हरेक किसिमले स’क्षम होस् भन्ने हुन्छ त्यसैले नै उनीहरु आफु भन्दा बढी उमेरको पुरुषसंग चाडै नै आ’कर्षित हुन्छन ।के’यरिङ्ग:बढी उमेरका पुरुष हरेक कुरामा अनुभवी हुनका साथै के’यारिंग पनि हुने गर्छन। यस्ता पुरुषहरुले आफ्नी श्रीमतीको माता पिताले जस्तै हेरचाह गर्छन। साथै गल्तिमा सु’धार्न आग्रह गर्ने तथा राम्रो कामको प्रसंशा गर्ने तथा हौ’शला बढाउने काम समेत गर्छन। यो कुरा सबै महिलामा लागु नभए पनि अधिकांश महिलाहरु यसै कारणले गर्दा आफु भन्दा केहि पाको र अनुभवी पुरुष प्रति आकर्षित हुने गर्छन।
गोहीले नि’ल्नै ला’गेको कुकुरलाई गो’हीको मु’खबाट वृ’द्धले यसरी जो’गाए (भिडियोसहित)
ऐश्वर्य रायको सौ’न्दर्य, यस्तो छ उनको जीवनशैली